Waa Maxay Duumo, Sidee Looga Hortagaa Duumada? |
Miski Cabdinuur Salal — April 13, 2019
Duumadu waa cudur halis galin kara nolosha. Waxay ka mid tahay cudurada faafa, waxaa sababa daris ku noole il ma’aragta ahaa. Waxayna ku faaftaa qaniinyada kaneecada dumarka ah (Anophel mosquito).
Duumadu waa cudur halis galin kara nolosha. Waxay ka mid tahay cudurada faafa, waxaa sababa daris ku noole il ma’aragta
Marka ay qofka qaniinto kaneecada qabta cudurka, sunta waxay ku daysaa jirka waxa ayna raacda wareega dhiiga, 48-72 saacadood gudahood sunta waxa ay ku badataa Unug-yada dhiiga cas, waxayna u safartaa xaggaa iyo beerka halkaas oo ay ku qaangaarto.
ahaa. Waxayna ku faaftaa qaniinyada kaneecada dumarka ah (Anophel mosquito).
Marka ay qaniinto kaneecada qabta cudurka, sunta waxay ku daysaa jirka waxa ayna raacda wareega dhiiga, 48-72 saacadood gudahood sunta waxa ay ku badataa Unug-yada dhiiga cas, waxayna u safartaa xaggaa iyo beerka halkaas oo ay ku qaangaarto.
Duumadu waxa ay weerartaa oo burburisaa unugayada dhiig cas. Nooco ugu dhibta badan waxa loo yaqanaa Bii’ef (Plasmodium Falciparum), noocaan waxay burburisaa dhamaan unugyada dhiiga cas haday noqon lahayd kuwa la sameeyey iyo kuwa waaweynba, taasoo keeni karta dhiig la’aan iyo cagaarshoow.
– Madax xanun
– Shuban caruurta yaryar ayaa badanaa lagu arkaa.
Calaamadaha Heerka Khatarta ah
– Miyirka oo doorsoomo
– Midabka kaadida oo madow noqoto
Sidee Looga Hortagaa Duumada?
– In la xirto maro kaneeco
– In guriga la iska buufiyo
– Deegaanka inay biyo fadhiistaan
– In la qaato daawooyin laga hortegi karo kaneecada
– Hooyada uurka leh in la siiyo fansadaar ka hortag ahaan.
– Dadka u safraayo meelo duumo ka jirtay inay qaataan daawada famsadaarka ah ka hortag ahaan.
Tags: Sidee Looga Hortagaa Duumada?Waa Maxay Duumo
Next post Dib u Dhigista Hawsha Maanta oo Aad Berri u Dhigato
Previous post Waa Maxay Godka Madoobi?